Wararka - Waxsoosaar cusub: Sirinjiye leh cirbad lagalaaban karo otomaatiga
Badeecad cusub: Cirbadda irbadda leh ee irbadda lagala baxo
Cirbadaha cirbadaha kaliya maahan cabsida carruurta 4 jirka ah ee qaata tallaalkooda; sidoo kale waa isha laga helo infekshannada dhiigga ku dhaca ee dhibaateeya malaayiin xirfadlayaal daryeel caafimaad ah. Marka cirbadda caadiga ah looga tago ka dib markii loo isticmaalo bukaanka, waxay si shil ah ugu dhegi kartaa qof kale, sida shaqaale daryeel caafimaad. Cirbadda lama-filaanka ah waxay qaadsiin kartaa qofkaas haddii bukaanku leeyahay cudurro dhiig ka yimaad.
Cirbadda si toos ah ayaa toos loogala soo baxayaa bukaanka foostada saliingaha markii qalabka wax lagu duubo uu si buuxda u niyad jabsan yahay. Ka-qaadista hore, dib-u-soo-celinta otomaatigga ah waxay baabi'isaa soo-gaadhista cirbadda wasakhaysan, taas oo si wax ku ool ah u yareysa halista dhaawaca cirbadda.
Astaamaha Sirinjiga Siigada Loola Laaban Karo:
qalliin hal gacan ah, isticmaalka isla siliingaha caadiga ah;
Marka cirbadda la dhammeeyo, cirbadda cirbadeynta si toos ah ayey dib ugu noqotaa usha xudunta, iyada oo aan wax ficil ah oo dheeri ah lahayn, si wax ku ool ah u yareyneysa halista dhaawacyada irbadda ee shilalka iyo dhibaatada ay u leedahay soo-gaadhista;
Qalabka qufulku wuxuu xaqiijiyaa in usha xudunta u ah lagu xiro saliingaha duritaanka ka dib, gebi ahaanba wuu ilaaliyaa irbadda saliingaha wuxuuna ka hortagayaa isticmaalka soo noqnoqda;
Qalabka badbaadada gaarka ah wuxuu ka dhigayaa sheyga in loo isticmaali karo in lagu hagaajiyo daawada dareeraha ah;
Aaladda badbaadada gaarka ah waxay xaqiijineysaa in siriinjadu aysan lumin doonin qiimaheeda isticmaalka qalliin aan habboonayn ama qalad xumo ku jirta geedi socodka wax soo saarka otomaatiga ah, gaadiidka iyo keydinta iyo sidoo kale ka hor cirbadda dareeraha.
Shayga kuma jiraan wax xabag ah iyo caag dabiici ah. Qaybaha birta ah ee qalabka dib u celinta waxay ka go'doonsan yihiin daawada dareeraha ah si loo hubiyo wax soo saarka oo xasilloon oo ammaan ah.
Cirbadda isku-dhafan ee isku-dhafan ee isku-dhafan, oo aan lahayn saqaf dhiman, waxay yareyneysaa dareeraha dareeraha.
Safety Badbaadada isticmaalka keliya oo leh hal hawl oo gacanta ah;
Ra Ka-noqoshada buuxda ee otomaatiga ka dib marka daawada laga baxo;
-Soo-gaadhis la'aanta irbadda ka dib marka si toos ah looga baxo;
Wuxuu u baahan yahay tababar ugu yar;
Needle Cirbad go'an, oo aan lahayn meel bannaan;
Yaree cabirka qashinka iyo qiimaha qashinka.